Labo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ka geystay Jubbada Hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaLabo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ka geystay Jubbada Hoose
April 20, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya.
Duqeynta ayaa Jimcadii ka dhacday deegaanka Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, sida taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay bayaan ku sheegeen maanta oo Sabti ah.
Ma ay jiraan wax shacab ah oo dhibbaato kasoo gaartay weerarka, bayaanka ayaa intaas raaciyay.
Tan iyo sanadkii 2017, Washington ayaa kordhisay duqeymaha ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan gudaha Soomaaliya.
Ugu yaraan 244 dagaalyahan oo katirsanaa Al-Shabaab ayaa lagu dilay 25 duqeymoood oo dhacay ilaa iyo sanadkan 2019, sida ay muujinayso tirakoob ay sii daayeen AFRICOM.
Sanadkii hore ee 2018, Mareykanka ayaa fuliyay 47 duqeymood oo ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana lagu dilay 338 dagaalyahan.
January 9, 2019 10 maleeshiyo oo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeymo ka dhacay koonfurta Soomaaliya
Garoowe-(Puntland Mirror) Odayaasha dhaqanka degmada Garoowe ayaa codsaday in la baneeyo xirmooyinka laga sameystay dooxooyin daaqsimeedyada ku dhow magaalada Garoowe. Mid kamid ah odayaasha dhaqanka oo la hadlay idaacada maxaliga ah ee Radio Daljir ayaa [...]